Ikhaya Amasu we Forex I-Supply and Demand Forex Trading Strategy ichazwe ngezibonelo
Ukuthengisela Demand Forex Ukuhweba Isu
1 Ukuthengisela Demand Forex Ukuhweba Isu
1.1 Ukuthengisela Demand kwi Forex Ishadi
1.2 I Thenga Isethaphu - Okufakiwe, Iphuma & Misa Ukulahlekelwa
1.3 The Setup Thengisa - Okufakiwe, Iphuma & Misa Ukulahlekelwa
1.4.3 Ungayifaka kanjani iSupply and Demand Forex Trading Strategy echazwe ngezibonelo?
Ukuthengisela Demand ... lena eside kwezomnotho eyisisekelo, elisho ukutholakala nabathengisi ukulahlekelwa futhi abathengi uzimisele ukuthenga. Sengikushilo lokho, kwaneliswe isidingo yizici ezibalulekile yentengo ukunyakaza. Empeleni, kokubili ukuze kwaneliswe isidingo kuthiwa elawula izinto wentengo, futhi ngesikhathi esifanayo intengo ulawula ukunikezela funa.
Njengoba sazi ukuthi ukuhweba imayelana intengo ukunyakaza, imiqondo ukuze kwaneliswe isidingo iyona kumele sihlanganiswe forex Ukuhweba.
Nakuba kungekho izimpahla noma amasevisi umklomelo ku forex Ukuhweba, iyunithi ukuthi wenziwa benana iyona lwemali pair uqobo. Ngokwesibonelo, kangakanani-Japanese Yen ingabe uzimisele bashintshisane okwesikhathi Dollar US? Ezweni ýkhasýmende, lawa imibuzo ocelwa. Imibuzo drive ukunyakaza izilinganiso zokushintsha zangaphandle. Imibuzo ukuthi zisithinta nathi njengamaKristu forex abahwebi.
Noma kunjalo, unikezwa ukuthi forex azikho izimpahla kokuba benana emakethe ngokomzimba, kungekho izibuya endalini ngokwamukela amabhidi, futhi akukho ukukhala evulekile amabhidi futhi linikeza phansi kukhonkolo zokuhweba, kunzima ngempela ukuhlola ntengo kwaneliswe isidingo siqine. Kunjengokungathi wonke umuntu ufuna ukudayisa, kodwa akekho owaziyo ngempela ntengo abanye abahwebi bazimisele ukuthenga noma ukuthengisa. Kuyini esingakwenzela Nokho kuyinto ukuqagela. Anyway, yilokho esikwenzayo njengoba abahwebi.
Ukuthengisela Demand kwi Forex Ishadi
Ngakho-ke, sazi kanjani ukuqagela lapho ukunikezela noma ukufuna siqine? Kusekelwe nomqondo intengo imibuthano futhi amathonsi. Abaningi kwaneliswe isidingo forex abahwebi ziye waqamba lezinhlangano njengoba rally-base-rally, yokuquba base uyadedela, yokuquba base-rally, noma ufune-base uyadedela. Noma kunjalo, ngeke lokuhlola ukuthi njengoba lokhu kungathatha isikhathi eside kakhulu isihloko.
Umqondo oyisisekelo wukuthi rally yisici eshadini lapho intengo kakhulu wakhumula kusukela zenyuka, ngenkathi iconsi yisici eshadini forex lapho intengo kakhulu lehla lisuka.
Abaningi kwaneliswe isidingo abahwebi baqagela ukuthi lokhu kungenxa oda okulindile ibekwe abahwebi zezikhungo, okwenza umqondo imbangela uma kukhona umuntu zingathinta intengo kakhulu, kuyoba abahwebi zezikhungo. Abanye abahwebi ngisho ahambe phambili futhi bakholelwa ukuthi ezinye zalezi oda okulindile kungukuthi egcwele ngenxa ayemane nje ethuswa ukuthengiselana kuleyo ndawo. Ngenxa yalokhu, lezi abahwebi futhi ukubeka oda zabo okulindile kuleyo ndawo, ukufunisela ukuthi intengo ayephinda futhi zenze noma uyiwise uma intengo ifinyelela kuleyo ndawo ngenxa asele gcwalisiwe oda okulindile.
Nasi isibonelo ukwehla intengo, okubonisa ukuthi kukhona supply oda okulindile kuleyo ndawo.
Phawula indlela intengo kakhulu kwehla kusuka kuleyo ndawo ukudala ikhandlela bearish eside.
Futhi nangu isibonelo rally, funa ekhombisa.
Nalapha, ikhandlela bullish eside, funa ekhombisa.
I Thenga Isethaphu - Okufakiwe, Iphuma & Misa Ukulahlekelwa
Ukuze lula lelisu, sizobe usebenzisa Ukuthengisela Demand inkomba, okuyinto sizikhandle osongoza lezi kwaneliswe isidingo izindawo kungenzeka.
Thenga Entry: Ukuze ufake isethaphu Thenga, kumelwe sigcine intengo njengoba lithinta eseduze fresh funa endaweni njebo isikwele blue ngu inkomba. Njengoba nje intengo ithinta endaweni, ikhandlela olandelayo kufanele bounce off the blue isikwele, okubonisa ukuthi intengo oyobuthela isipele.
Misa Ukulahlekelwa: Ukulahlekelwa stop kufanele kube nje Pips ambalwa ngezansi blue isikwele.
Thatha Profit 1: I inzuzo azithathe ukuze engxenyeni yokuqala ka isikhundla kufanele kube 50% umugqa phakathi endaweni funa (blue isikwele) futhi eseduze supply endaweni (obomvu isikwele).
Thatha Profit 2: I inzuzo azithathe ukuze isigamu esisele isikhundla kufanele kube 80% umugqa phakathi endaweni funa (blue isikwele) futhi eseduze supply endaweni (obomvu isikwele).
Trailing Stop: Lapho nje qala inzuzo ilitshe hit, ekulahlekelweni stop kufanele trailed ukuba Breakeven kanye Pips ezimbalwa.
The Setup Thengisa - Okufakiwe, Iphuma & Misa Ukulahlekelwa
Thengisa Entry: Ukuze ufake isethaphu Thenga, kumelwe sigcine intengo njengoba lithinta eseduze fresh supply endaweni njebo isikwele ebomvu nge inkomba. Njengoba nje intengo ithinta endaweni, ikhandlela olandelayo kufanele bounce off konxantathu obomvu, okubonisa ukuthi intengo ziyoyetha.
Misa Ukulahlekelwa: Ukulahlekelwa stop kufanele kube nje Pips ambalwa ngaphezu isikwele ebomvu.
Thatha Profit 1: I inzuzo azithathe ukuze engxenyeni yokuqala ka isikhundla kufanele kube 50% umugqa phakathi supply endaweni (obomvu isikwele) futhi eseduze endaweni funa (blue isikwele).
Thatha Profit 2: I inzuzo azithathe ukuze isigamu esisele isikhundla kufanele kube 80% umugqa phakathi supply endaweni (obomvu isikwele) futhi eseduze endaweni funa (blue isikwele).
Isu Ukuthengisela Demand ingenye amasu kakhulu umsindo ngokunengqondo ezitholakala khona. Kusekelwe ocatshangelwayo kwezomnotho, okuyinto smartly eyafakwa forex Ukuhweba. Empeleni, kukhona kwaneliswe isidingo ukuhweba gurus eziningana phandle lapho amarekhodi ithrekhi efakazelwe kanjani ukunikezela amasu funa umsebenzi.
Noma kunjalo, ngisho noma ungase kahle ukuhlonza kwaneliswe isidingo izindawo, ke akusho ukuthi kukhona Namanje abanye oda okulindile oshiywe kuleyo ndawo engakwenza intengo kudingeke bounce off. Konke yangempela kwenzeke futhi ukuhweba imiphetho. Lelisu ngokuqinisekile unawo ukuhweba onqenqemeni eqinile, esekelwe idatha zomlando nesikhali salabo abasebenzisa lelisu.
Enye imbibizane kwaneliswe isidingo, wukuthi kuthatha isikhathi ukuze balukhulume. Kufanele kuthathe emhlabeni ngonyaka ukuze balukhulume ekukhombeni kwaneliswe isidingo izindawo evumelekile. Into enhle nale Nokho wukuthi le nkomba lobuchwepheshe akwazi ukusiza ekukhombeni kwaneliswe isidingo izindawo. Ulwazi oluyisisekelo umdwebo kwaneliswe isidingo izindawo zaziyoqhubeka ezinhle, njengoba izinkomba abakakholiseki ephelele.
Kukonke, lelisu a winner ngenxa efakazelwe ukuhweba usiko.
I-Supply and Demand Forex Trading Strategy echazwe ngezibonelo inhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-Supply and Demand Forex Trading Strategy echazwe ngezibonelo inikeza ithuba lokuthola izici ezihlukile namaphethini kumanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Ungayifaka kanjani iSupply and Demand Forex Trading Strategy echazwe ngezibonelo?
Landa iSupply and Demand Forex Trading Strategy echazwe ngezibonelo.zip
Iya kwesokudla ukukhetha Ukunikezwa Nesidingo Sokuhweba Kwamasu Okuchazwe Ngezibonelo
Uzobona iSupply and Demand Forex Trading Strategy Explained With Examples iyatholakala kuShadi lakho
Isiqephu esedluleUkukala Of Guqula MT4 Inkomba
Isihloko esilandelayoMulti CCI Imicibisholo Forex Binary Options Trading Strategy
uFestu May 22, 2018 At 8:33 pm
Michael Motsepe Januwari 29, 2020 At 7:55 am
Sawubona Mnu Morris. Ngingathanda ukwazi ukuthi isu lokuhlinzeka nokufunwa liyasebenza yini ekuhwebeni kosuku nangezikhathi ezibekiwe ze-1m 5m 15m 30m ne-1h. Kuyisu elimangalisayo.
Januwari 19, 2022
Isikhombi se-MT5 esihlukanisayo esikabili
I-MACD enamazinga e-SR eshadini I-MT5 Inkomba
Izinkomba ze-Forex MT54407
Amasu we Forex1126
UTim Morris - Januwari 19, 2022 0